Hadaf dejinta Nolosha iyo Fulintiisa W/Q Farhan Mohamed Sultan Nur (Rakad)(Hadhwanaagnews) Thursday, January 12, 2017 09:59:14Hadafku waa waxkasta oo aad rabtid inaad gaadhid kaas oo aad jeceshay inaad guul ka gaadhid, hadafku waa nolosha , noloshuna waxay leedahay baahiyo
Hadafku waa waxkasta oo aad rabtid inaad gaadhid kaas oo aad jeceshay inaad guul ka gaadhid, hadafku waa nolosha , noloshuna waxay leedahay baahiyo, han iyo hiigsi, sidaa daraadeed hadafku wuxuu ku dhex jiraa wakhtigan socda , hadafku waa nolosha, waa wakhtiga iyo sidaad uga faa,ideysatid, waana halka aynu niyadda ku hayno inaynu gaadhno, qofkasta
oo inaga midi wuxuu leeyahay hadafyo kala duwan oo uu noloshiisa is leeyahay gaadh, adiga oo arday oo aan aqoon u lahayn waxa uu hadaf yahay ayaa markii aad yarayd ee aanad aqoonta lahayn , haddii lagu waydiiyo maxaad doonaysaa inaad noqotid markaad waynaatid ? isla markaba waxaad jawaabi jirtay macalin, dhakhtar , injineer, boolis, darawal I.W.M
1. Fikir kana fikir mustaqbalkaaga maxaad rabtaa inaad noqotid, maxaad rabtaa inaad heshid cadee kuna cadee buuga ku hor yaala , adigoo siday u kala muhiimsan yihiin u qoraya
2. Qor dhamaan hadafyadaada nololeed ee aad dooneysid inaad gaadhid waana in ay kuu cad yihiin waxaad doonaysid inaad gaadhid iyo Sababta keentay inaad hadaf yeelatid
3. Hadafyadaas u qorshee una diyaari sidii aad u gaadhi lahayd, wakhtigii iyo kartidiiba aad ku gaadhin-laheydba.
4. Maalinkasta qayb ka mida waa inaad qabataa ama waa in aad ka fikirtaa sidii aad u qaban lahayd ama aad u sixi lahayd wixii qaldamay.
5. Hadafyadaadu ha noqdeen hadafyo caqli gal ah oo la gaadhin karo iyo hadafyo leh wakhti la gaadhin karo, kuna dhisan xaqiiqada lana jaan-qaadaya wakhtiga iyo technologiyadda.
6. Liis garee faa,idooyinka hadafyadaada iyo carqabadaha iman kara
7. Waa in uu jiraa wakhti uu bilaabmo iyo wahti kama dambeysa oo aad gaadheysaa
8. Fuli dhamaan qorsheyaashii aad sameysay una fulin sidii ay u kala muhiimsanaayeen
9. Yeelo aqoontii aad ku qaban lahayd hadafyadaada, kalsooni, karti, daacadnimo,ficil,samir, rabitaan, iyo aqoonta xalinta iyo xasiloonidaba.
10. Sameyso Wehel , saaxiib daacada oo kaala talisa dhamaan hadafyadaada cidaasina ha noqoto cid ku faraxsan guushaada.
11. Qiimee markasta sida ay u socdaan hadafyadaadu , dibna u hubi una sax .
12. Marka aad gaadhid ee aad faraxdid Alle ugu mahadnaq , dadkii iyo ciddii kaa caawisayna u abaal gud.
13. Dabadeedna is qiimee ma taagan tahay halkii aad qorsheysan haa , Ilaahay ugu mahadnaq. Haddii kale ku celi ilaa inta aad ka gaadheysid.
14. Dabaal deg oo xusuus qorkaaga ku dar